Tue, Jul 7, 2020 at 8:40pm
तेस्रो राइनो गोल्डकपमा सशस्त्र प्रहरी र देशभक्त युथ क्लब भिड्दै
काठमाडौ १९ कार्तिक । नवलपरासीमा जारी तेस्रो राईनो गोल्डकप फुटबलको तेस्रो क्वार्टरफाईनलमा आइतबार विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ र देशभक्त युथ क्लबबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नवलपरासीको कोल्हुवास्थित स्थानीय खेल मैदानमा खेल अपरान्ह ३ बजेपछि सुरु हुनेछ । यसअघि हिजो भएको खेलमा वीरगञ्ज फुटबल क्लबलाई २–० ले हराउँदै संकटा क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । देशभक्त युथ क्लब, आयोजक नन्द–भाउजु मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई..
एजेन्सी,कात्तिक १७ । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अर्जे्न्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले आफूमाथि मानहानी भएको मुद्दा जितेका छन् । उनले मुद्दा जितेर पाएको झण्डै ८३ हजार अमेरिकी डलर ‘डक्टर्स विथआउट बोडर्स’ नाकको सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरेका छन् । सन् २०१४ को विश्वकपमा स्पेनिस पत्रिका ला राजोनले मेस्सीमाथि प्रतिबन्धित शक्तिबर्धक औषधि प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो । फाइनलमा १–० ले जर्मनीसँग हारेको खेलमा मस्ेसी प्रतियोगिताकै..
नेपाली युवा टोली पहिलो अभ्यास खेलमा पराजित
काठमाडौं, कात्तिक १६ । एसिया कपको तयारीका लागि बंगलादेशमा रहेको नेपाली यु–१९ क्रिकेट टोली पहिलो अभ्यास खेलमा घरेलु टोलीसँग पराजित भएको छ । तीनओटा अभ्यास खेल खेल्न बंगलादेश पुगेको नेपाली टोली बिहीबार सम्पन्न पहिलो खेलमा बंगलादेशको यु–१९ टोलीसँग ३ विकेटले पराजित भएको हो । खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १५३ रन जोडेको थियो । नेपालका लागि..
टि–२० विश्वकप छनोटका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा
काठमाडौं, १६ कात्तिक । आइसीसी महिला टि–२० विश्वकपको एसियाली छनोटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । रुविना क्षेत्रीको कप्तानीमा ३ बैकल्पिकसहित १७ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको हो । आइसीसीका प्रतिनिधि अनिमुल इस्लाम, पुरुष टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा, महिला टोलीका प्रशिक्षक सामसन थापा र कप्तान रुविना क्षेत्री सम्मिलित छनौट समिटिले नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपाली टोलीका सदस्यहरुमा..
काठमाडौं कार्तिक १५। थ्री स्टार एकेडेमी र ग्यासियर कलेज राजधानीमा जारी प्रथम प्याब्सन यू–१८ राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ बुधवार क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । नयाँबसपार्क्स्थित ढोरपाटन स्पोर्टस टेनिङ सेन्टरमा भएको प्रिक्वाटरफाइनल खेलमा बुढानिलकण्ठको थ्री स्टारले झापा विद्यालय भलिबल कमिसनलाई २५–२१, २५–१५ को सोझो सेटमा हराएको हो । त्यस्तै कोटेश्वरको ग्लासियर कलेजले धादिङको एड्भान्स एकेडेमीलाई २५–१०, ३१–२९ को सेटमा हराउँदै अन्तिम..
काठमाडौं, कार्तिक १४। एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिपको छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल कीर्गिस्तानसँग पराजित भएको छ । कीर्गिस्तानको बिस्केकस्थित डोलेन ओमुरजाकोभ स्टेडियममा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग २–० ले पराजित भएको हो । खेलको २१ औँ मिनेटमा १–० ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल खाँदा २–० ले पराजित भयो । यो जितसँगै किर्गिस्तानले भने तीन अंक जोडेको छ । समूह..
यू–१९ क्रिकेट टोलीको घोषणा, जितेन्द्र र रासिद नयाँ अनुहार
काठमाडौं, १३ कार्तिक । एसीसी यू–१९ एशिया कपका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । जम्मा १८ सदस्यीय टोलीमा जितेन्द्र सिंह र रासिद खानले पहिलो पटक स्थान बनाएका छन् । यसअघि टिममा परिसकेका सन्दिप जोरा र बिक्रम भुसाल भने बैकल्पिकमा परेका छन् । नेपाली टोलीको कप्तानमा यसअघि झैं दिपेन्द्रसिंह ऐरीले निरन्तरता पाउनेछन् । टिमका अन्य सदस्यमा रोहित पौडेल, सन्दिप लामिछाने, सन्दिप..
कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला अब ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय’ बन्दै !
काठमाडौं असोज २६ । विशेषगरी नेपालका क्रिकेट प्रेमीहरुलाई खुशीको खबर प्राप्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जोरखानी खेलकुद महासंघ (आइजेटएसएफ)को सहयोगमा नेपालकै क्रिकेटको इतिहास बोकेको कीर्तिपुरस्थित टीयू ग्राउण्ड भनेर समेत परिचित क्रिकेट ग्राउण्ड अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय बन्ने पक्का भएको छ । रंगशाला अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय बनाउनका लागि थप जग्गा चाहिने भएको हुँदा त्यसका लागि आवश्यक थप जमिन कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने छ ।..
अष्ट्रेलियाबासी नेपाली सञ्जीव चौधरी बने 'स्टेट च्याम्पियन'
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका सञ्जीव चौधरी आइसिएन एनएसडब्लु प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ दुई गोल्ड र एक सिल्भर मेडल जित्दै स्टेट च्याम्पियन घोषित भएका छन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको उक्त प्रतिस्पर्धामा चौधरीले पुरुषतर्फ इन्टरमेडियट र ३० प्लस उमेरमा गोल्ड मेडल जिते भने पुरुषतर्फको खुल्ला स्पर्धामा उनले सिल्भर सुरक्षित गरे । यसअघि समेत विभिन्न मेडलहरुमा अधिपत्य जमाइसकेका चौधरीले गतवर्ष हंगेरीमा आयोजित विश्व फिटनेश च्याम्पियनसिपमा समेत..
अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको उपाधि गोरखपुरका शैलेशलाई
नवलपरासी, असोज १६ । नवलपरासीको भुजहवामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको उपाधि उत्तर प्रदेश, गोरखपुरका शैलेश पहलवानले जितेका गरेका छन् । आइतबार सम्पन्न प्रतियोगिताको उपविजेता भारतकै बहराइचका राधे पहलवान बने । प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हासील गर्न सफल शैलेशले नगद रु पाँच हजार सहित मेडल प्राप्त गरे भने दोश्रो हुने राधे पहलवानले नगद रु तीन हजार सहित मेडल पाएका थिए । दशैँको अवसर पारेर नवदुर्गा..
यु–१८ साफ च्याम्पियनशीप : नेपालले माल्दिभ्सलाई २–० ले हरायो
काठमाडौं, असोज ६ । १८ वर्षमुनीकाहरुको साफ च्याम्पियनशीप अन्तर्गत शुक्रबार माल्दिभ्स बिरुद्ध भएको खेलमा नेपालले शानदार २–० गोल अन्तरको जीत निकालेको छ । नेपाललाई जीततर्फ लैजाने क्रममा रोमन लिम्बुले खेलको ७ औँ मिनेटमा तथा रेजिन सुब्बाले ५७ औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए । यसअघि भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल इतिहासमै पहिलोपटक भुटानसँग १–० ले पराजित हुन बाध्य भएको थियो । राष्ट्रिय टोली..
१३औं सागमा जम्मा २५ खेलको आयोजना हुने, कराँते पनि समावेश
काठमाडौं । डेढ वर्षपछि नेपालमा हुने भनिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि जम्मा २५ खेलको निर्णय भएको छ । नेपालको पदक जित्ने सम्भावना ठानिएको खेल कराँतेलाई पनि उक्त विधाहरुमा स्थान मिलेको हो । तुर्कमेनिस्तानको अस्गाबतमा मंगलबार सम्पन्न दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले कराँते, बास्केटबल, फेन्सिङ र गल्फ समावेश गर्दै कुल २५ खेलको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल ओलम्पिक..
बेलायतको ‘बेन नेभिस अल्ट्रा’ दौडमा नेपालकी मीरा राई प्रथम
१ असोज, काठमाडौं । नेपाली अल्ट्रा धाविका मिरा राईले बेलायतको ‘बेन नेभिस अल्ट्रा’ दौड जितेकी छन् । राईले निर्धारित दुरी १५ घन्टा २७ मिनेट चार सेकेण्डमा पुरा गर्दै महिलातर्फ पहिलो भएकी हुन् । समग्र प्रतियोगितामा भने मिरा छैटौं भएको आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै, पुरुषतर्फ पहिलो भएका डोनाल्ड काम्पबेलले जम्मा १३ घन्टा २४ मिनेट २० सेकेण्डमा दौड पुरा गरेका थिए । पुरुष र..
एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजनको उपाधि नेपाललाई, हङकङ ५ विकेटले निराश
१ असोज, काठमाडौं । एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजनको उपाधि नेपालले जितेको छ । यससँगै च्याम्पियन नेपाल एशिया कप क्रिकेटका लागि पनि छनौट भएको छ । यसअघि हङकङले नेपाललाई ७७ रनको लक्ष्य दिएको छ । हङकङलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा साहब आलम र सन्दिप लामिछानेले ३–३ विकेट लिए भने अनिलकुमार साह र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको खातामा १–१ विकेट आयो । टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो..
नेपाल एसीसी यू–१९ 'इआर' को फाइनलमा प्रवेश, १० विकेटको जीत
३१ भदौ, काठमाडौं । मलेशियामा जारी एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगितामा घरेलु टोली मलेशियालाई १० विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार मलेशियामा भएको सेमिफाइनलमा घरेलु टोलीले प्रस्तुत गरेको १ शय २२ रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले २३ दशमलव १ ओभरमा बिना कुनै विकेटको क्षतिमा भेट्टाउन सफल भएसँगै फाइनलको यात्रा सुनिश्चित बनेको हो । नेपाललाई सहज जित दिलाउने क्रममा ओपनरद्धय..
एसीसी यु–१९ : सिंगापुरलाई ७ विकेटले हराउँदै नेपाल समूह ‘ए’ विजेता
२९ भदौ, काठमाडौं । मलेशियामा जारी एसीसी यु–१९ इस्टर्न रिजनको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई ७ विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै समूह विजेता बन्न सफल भएको छ । सिंगापुरलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा पवन सर्राफले ६ विकेट लिएका थिए । ८ ओभर बलिङ गरेका उनले ४ मेडन राख्दै मात्र १२ रन खर्चिएका थिए भने किशोर महतोले २ तथा सन्दिप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह..
नेपालद्धारा भुटान ९ विकेटले पराजित
काठमाडौं । एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगितामा नेपालले भुटानलाई ९ विकेटले हराउँदै लगातार दोस्रो जित हात पार्दै आफ्नो अवीजित यात्रालाई कायम राखेको छ । मलेसियामा जारी खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले ५१ रनको झिने स्कोरमै समेटिएको थियो । जसलाई नेपालले मात्र ८ दशमलव ३ ओभरमा १ विकेट गुमाएर सजिलैसँग पूरा गरेको थियो । भुटानका लागी टासी फुन्सोले १६ र उर्गेन दोर्जीले..
एसीसी यु–१९ छनौट: थाइल्याण्ड विरुद्ध नेपालको फराकिलो जित
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एसीसी यु–१९ एसिया कप क्रिकेटको छनौट प्रतियोगिमा थाइल्याण्ड विरुद्धको खेलमा नेपालले शानदार जित हात पारेको छ । थाइल्याण्डलाई २ सय ५५ रनको भारी अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले नयाँ आशा जगाएको हो । खेलमा नेपाल टस हारेर पहिला व्याटिङका लागि मलेसियाको अमान क्रिकेट मैदानमा उत्रिएको थियो । नेपालले थाइल्याण्डसामु कुल २ सय ८२ रनको चुनौति पेश गरेको थियो..
थाइल्याण्डविरुद्धको खेलमा अनिल साहको अर्धशतक
२६ भदौ, काठमाडौं । एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगितामा अहिले नेपाल र थाइल्याण्ड बीचको खेल जारी छ । प्रतियोगितामा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २७.२ ओभरमा २ विकेट गुमाएर कुल १४४ रनको योगफल तयार पारेको छ । जसमा नेपालका लागि अनिलकुमार साहले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । सोही प्रतियोगितामा सन्दिप सुनारले ३२ र आसिफ शेखले १३ रन बनाएका छन् । मलेसियामा जारी एसीसी यू–१९..
टेस्ट क्रिकेटमा एन्डरसनको ५ सय विकेट पूरा
लन्डन । इङल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जेम्स एन्डरसन त्यहाँको क्रिकेट इतिहासमा आफ्नो सुनौलो नाम लेखाउन सफल भएका छन् । एण्डरसनले आफ्नो खेल जिवनमा ५ सय टेस्ट विकेट पूरा गर्दै इङल्यान्डको पहिलो बलर बनेका हुन् । यससँगै टेस्ट क्रिकेटमा ५ सय विकेट पूरा गर्ने उनी विश्वका छैटौं एवम् तेस्रो तीव्र गतिका बलर बनेका छन् । एन्डरसनले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको तेस्रो टेस्टको दोस्रो इनिङमा ओपनर क्रायग..
युएस ओपनको जीत नजिक नाडाल
न्युयोर्क । यतिबेला विश्वचर्चित टेनिस खेलाडी राफेल नाडाल फेरि युएस ओपन च्याम्पियन हुने तरखरमा पुगेका छन् । नाडाल अहिले उपाधीदेखि मात्र एक जितको दूरीमा पुगेका हुन् । सन् २०१० र २०१३ मा च्याम्पियन भैसकेका ३१ वर्षे स्पेनिस खेलाडीले डेल पोर्टोलाई शुक्रबार ४–६, ६–०, ६–३, ६–२ को नतिजामा पराजित गर्दै करियरमा २३औं पटक ग्रान्ड स्लाम प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् । यसअघि..
बेलायत बिरूद्व वेस्ट इण्डिजको ऐतिहासिक जीत
वेस्ट इन्डिजले मंगलबार राति भएको दोश्रो टेस्टमा बेलायतमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको छ । वेस्ट इन्डिजले १७ वर्षयता पहिलोपल्ट बेलायतकै भूमिमा टेस्ट जित्न सफल भएको यो हो । रोमाञ्चक पाँच विकेटको जित निकाल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजले सफलतापूर्वक ३ सय २२ रन पछ्याएको हो । त्यसक्रममा वेस्ट इन्डिजका ब्याट्सम्यान साइ होप दुवै इनिङ्समा शतक बनाउन सफल भएका थिए । खेलमा बेलायतले आफ्ना दुई इनिङ्समा..
एशियाबाट ४ टिमले विश्वकप खेल्ने पक्का
एशियाली क्षेत्रको छनोटअन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा विजयी हुँदै दक्षिण कोरिया र साउदी अरेबियाले स्थान पक्का गरेसँगै अब एशियाबाट कुल ४ टिमले रूस विश्वकपमा सहभागिता जनाउने भएका छन् । जसअन्र्तगत यसअघि नै इरान र जापानले विश्वकपमा आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेका थिए । एसिया क्षेत्रको छनोट अन्तर्गत समूह ए को खेलमा मंगलबार राति उज्वेकिस्तानसँग गोलरहीत बराबरी खेल्दै दक्षिण कोरिया विश्वकपका लागि छानिएको..
काठमाडौको टोखामा जारी उत्तरभेगीय फुटबलको रौनक
आहा संवाददाता, काठमाडौ भाद्र १७ भगवती युवा क्लबको आयोजनामा यतिखेर राजधानीको टोखास्थित फुटबल मैदानमा लिग जारी छ । जसमा राजधानीका उत्तरभेगीय एक से एक टीमहरु आमने सामने भैरहेका छन् । अन्य वर्षहरुमा भन्दा यसपटक युवा खेलाडीहरुको बाहुल्यता बढी रहेकाले स्थानीय दर्शकहरु आकर्षित भैरहेको आयोजकले जनाएको छ । हुन त यो प्रतिश्पर्धा बि डिचिजनको भएतापनि यसपटक ए डिभिजनका खेलाडीहरुको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहेको खेलाडी..
काठमाडौं, श्रावण ३१ । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप अन्तर्गत हङकङबिरुद्ध हुने खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रारम्भिक छनौट गरिएको छ । मूख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काले २५ सदस्यीय प्राम्भिक टोलीको छनौट गरेका हुन् । घोषणा भएको नेपाली टिममा केन्या विरुद्धको खेलमा टिममा परेका खेलाडीका साथै केहि नयाँ अनुहार पनि परेका छन् । चोटका कारण टिममा पर्न नसकेकका सौरभ खनाल..
दिपेन्द्र सिंह ऐरी पिपुल च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा
युवा क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी ‘पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड’ अन्र्तगत पिपुल च्वाइस अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् । आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पिपुल च्वाइस अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । ऐरीसँगै पौडीकी गौरिका सिंह, एथ्लेटिक्सका कान्छीमाया कोजु, जुडोकी फुपुल्हामु खत्री र फुटबलका सुजल श्रेष्ठ पनि उक्त मनोनयनमा परेका छन् । ..
पोखराः पोखरा रङ्गशालाको हातामा नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहिलो स्केटिङ ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । करिब रु ३० लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ सङ्घले निर्माण गरिएको यस सेन्टर निर्माण सुरु भएको तीन हप्तामै काम सकिएको समितिका क्षेत्रीय अध्यक्ष खगराज पौडेलले जानकारी दिए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा स्केटिङ खेलका खेलाडी उत्पादन..
काठमाडौंः धनगढी प्रमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको उपाधि टिम चौराह धनगढीले जितेको छ । टिम चौराह र विराटनगर किंग्सबीच शनिबार दिउसो भएको खेलमा विराटनगर विरुद्ध ६२ रनको जित निकाल्दै चौराहले उपाधि जितेको हो । धनगढीस्थित एसएसपी कार्यालय क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा टस जितेर व्याटिङ रोजेको चौराहले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १५९ रन बनाएको थियो । जवाफी व्याटिङमा आएको विराटनगर किंग्सले १८.१..
काठमाडौं: धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को फाइनल खेल आज धनगढी टिम चौराहा र विराटनगर किंग्ससँग उपाधिका लागि भिड्दै छन् । चौराहको कप्तानी राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का र बिराटनगरको लागि शरद भेषवाकरको कप्तानीमा बिराटनगर शनिबार भिड्ने भएका हुन् । टिम चौराहाले सात गते भएको अन्तिम प्लेअफमा शक्ति गौचनको रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई हराएको थियो । विहीबार भएको प्लेअफमा रुपन्देही च्यालेन्जर्स धनगढीसँग ९२ रनले पराजित भएको..
काठमाडौंः ‘समाज सेवाका लागि स्वस्थ जीवन’ भन्ने नारासहित लायन्स क्लब अफ बालाजु र लियो क्लब अफ बालाजुबीच नयाँ वर्ष २०७४ को अवसर पारेर मैत्रीपूर्ण फुटशल खेल सम्पन्न भएको छ । लायन्स क्लब अफ बालाजुका प्रेसिडेन्ट राजु खडकाको नेतृत्वमा रहेको लायन्सहरुको टिम र लियो क्लब अफ बालाजुका प्रेसिडेन्ट प्रज्वलरत्न शाक्यको नेतृत्वमा रहेको लियोहरुको टिमबीच काठमाडौं क्षेत्रपाटीस्थित कुमारी फुटशलमा उक्त खेल सम्पन्न भएको..
Results 1926: You are at page 64 of 65